Guddigii loo saaray dhulka ciidamada badda oo go'aan garaay balse la cadaadiyey - Caasimada Online
Home Warar Guddigii loo saaray dhulka ciidamada badda oo go’aan garaay balse la cadaadiyey
Guddigii loo saaray dhulka ciidamada badda oo go’aan garaay balse la cadaadiyey
Muqdisho (Caasimada Online) – Ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa Caasimada Online u sheegay inay go’aan gaareen guddigii uu taliyaha ciidamada xoogga dalka Jeneraal Odawaa Yuusuf Raage u saaray inay baaraan dhulka ciidamada badda ee la sheegay in la boobayo.
2- In Taliyaha ciidamada Badda Soomaaliya Jeneraal Cabdixamiid Maxamed Dirir uu ku kacay fal aad u baalmarsan anshaxa ciidanka, oo uu meel weyn uga dhacay sumcadda ra’iisul wasaaraha, sidaas darteedna xilka laga qaado.
Si kastaba, guddiga ayaa laga hor-istaagay inay shaaciyaan go’aankooda, ayada oo Taliyaha ciidanka xoogga dalka Jen. Odawaa uu ka horyimid go’aanka guddiga, islamarkaana dib ugu diray warqad uu guddiga ku waydiinayo su’aalo ay horay uga jawaabeen kuna handadayo.
Ilo wareedyada ayaa sheegaya in Wasiirka Gaashaandhiga oo markii hore amray baaritaanka aan lala wadaagin jawaabtii Guddiga.
Caasimada Online ayaa ogaatay in arrintan ay ugu wacan tahay kadib cadaadis xooggan oo kaga yimid madaxtooyada Soomaaliya, oo markii horeba la rumeysnaa inay ka dambeysay weerarka lagu qaaday shaqsiyadda Rooble.